Lokomotiv Moscow oo sabab la yaab leh ku diiday saxiixa Neymar intii uusan tagin Yurub – Gool FM
Lokomotiv Moscow oo sabab la yaab leh ku diiday saxiixa Neymar intii uusan tagin Yurub
Liibaan Fantastic February 8, 2018
(Moscow) 08 Feb 2018 Kooxda dalka Ruushka ee Lokomotiv Moscow ayaa sabab la yaableh ku diiday saxiixa Neymar JR markii uu ahaa 17 jir.
Madaxwaynihii hore ee kooxda Lokomotiv Moscow ayaa sheegay in kooxdiisu ay heshiis la gaartay Santos si ay ula wareegto 2009 laacibka haatan ee PSG.
Wuxuu sheegay in Santos ay kula heshiiyeen 10 milyan oo euro, laakiin wuxuu cadeeyay inuu aad u yaraa isla markaana uu ahaa mid caato ah oo aan awoodin inuu la qabsado horyaalka Ruushka.
“Neymar aad ayuu u yaraa, ma damaanad qaadi karin inuu la qabsan karo horyaalka ruushka, wuxuu ahaa caato, waana uu yaraa, sidaas darteed waan iska diidnay saxiixiisa” ayuu u sheegay Sport Express madaxwaynihii hore ee Lokomotiv Moscow.
“10 milyan ayaa kula heshiinay kooxda Santos si aan u soo afjarno heshiiska, kooxda reer Brazil waxay doonaysay 12 milyan, laakiin heshiiska waxaan ku soo afjarnay 10 milyan, waa lacag badan marka loo fiiriyo laacib da’yar oo jooga meel ka baxsan yurub”.
“Waxaan haysanay waqtigaas ciyaartoy cajiib ah sida Alan Gatagov kaas oo leh xirfada Neymar oo kale”.
Guardiola oo ka saramaray Mourinho (Arag liiska 10-ka tababare ee ugu mushaarka badan adduunka)
"Pique wuxuu difaacayay xaaskiisa iyo caruurtiisa" - Luis Suarez oo difaacay falkii uu sameeyay saaxiibkiis